Nri maka ngwa ngwa ngwa ngwa
Ajụjụ "Olee otú ị ga-esi ghara iri nri, ịlaghachi" n'ụsọ osimiri ha? "A jụrụ naanị ndị malitere ịme egwuregwu na-emeghe. Ndị dibịa di elu na-edozi nsogbu a di iche iche: "Gini ka o kwesiri iri nri iji nweta ihe kachasi nma?" Nri a choro nke oma enweghi ike ime ka agha di ala ma buru oke ibu, kamakwa inye ya ego di nma. A ghaghị ịbanye na nri maka ngwa ngwa ngwa ngwa.
Na-eri ma ọ bụ na-eri nri?
Ya mere, maka taa, ị nwere ndekọ na Ụlọ Mmanya ahụ. Na nke ikpeazụ, ị na-ezube ịhapụ: otu njiri kalosi (na-aga ma ọ dịkarịa ala otu calorie ole na ole!), Otu akụkụ nke "ntị" na ọkara ọkara dịkarịa ala. Mana ọ bara uru ime ememme a na nri ụtụtụ kachasị mma? Gaa na Ụlọ Mmanya na afo efu, ọ dịkarịrị na ị ga-enwe afọ ojuju, ekwesịghị. Ọ ka mma inwe ezigbo nri abalị 2-3 awa tupu ịma mma-mma ma ọ bụ obere nri tupu ị apụ n'ụlọ. Nke mbụ, ọtụtụ usoro nwere ike ịmị ọkụ (dịka ọmụmaatụ, ịhịa aka n'ahụ, hydromassage, SPA-capsule ma ọ bụ sauna infrared) na na-ekwekọghị na nchịkọta nri mgbe e risịrị nri. Nke abuo, na afo ma ọ bụ nke na-enweghị isi, ị nweghị ike izuike, nke pụtara na ị gaghị enwe mmasị na usoro (dịka ọmụmaatụ, ihe ntanetị ọkụ ma ọ bụ ịhịa aka n'ahụ).
Nnu - enweghị!
Hichapụ "ọnwụ ọcha" site na nri gị taa. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-eri nri nnu na-enweghị nnu, mgbe ahụ, i nwere ike ịme ụma n'ememme mgbe niile! A gaghị atụ aro nnu ma ọ bụ mgbe usoro ahụ gasịrị, n'ihi na nnu nnu na-egbochi mkpochapu mmiri n'ime usoro nkewa nke anụ ahụ. Idebe njigide mmiri bụ edema, na ọzịza nke anụ ahụ na-ejide onwe ya bụ cellulite (karịa kpọmkwem, ya enweela 2-3rd stage!). Ya mere 'saa' na mgbede usoro gị na biya na azụ, kwa ngwa ngwa, ma ọ bụghị na ị ga-eme ka ọrụ niile nke ndị nwe ụlọ.
Kedu ihe anyị ga-aṅụ?
2-3 awa tupu na mgbe ihe omume ọma gị, zere ịṅụ oké mmanya. Na aka gị (ma ọ bụ kama nke ahụ, na ebe anyị na-emeziwanye) iji mepụta ụfọdụ enweghị mmiri, nke mere na mmiri ahụ bara ụba na-arịwanye elu. Mgbe ahụ, mmetụta nke usoro ihe omume ahụ ga-adọrọ mmasị! Dịka ọmụmaatụ, ịnweta oyi na-atụ oyi ma ọ bụ ihe ọkpụkpụ na-ekpo ọkụ, ịhịa aka na-acha anwụrụ ọkụ nwere mmetụta dị ike diuret, na-eme ka mmezu nke usoro mmemme cellulite pụta. Na-aṅụ ọtụtụ (n'ezie, mmiri) ị nwere ike ugbua na 3-4 awa mgbe wrapping. Buru n'uche: mgbe ị na-ekewa anụ ahụ na-adọrọ adọrọ, a na-emepụta nsí, nke a ga-ewepụ kpamkpam! Ọ bụrụ na ị debara aha na caffeine, ma ị nwere nsogbu na nrụgide (ọ bụ ezie na ịdọ aka ná ntị ọkachamara gbasara ya!), Na Day Beauty, zere kọfị, tii siri ike, cola na tonics. Caffeine, nke a na - enweta site na ihe ọṅụṅụ, ya na ihe dị n'ime akpụkpọ ahụ, nwere ike ịmalite ịmalite ịrịa ọbara na mgbapụta.
Kemmiri nectarine ma ọ bụ ... Dry mandarin?!
Ọ bụrụ na okwu bụ "Ala na cellulite!" Maka gị - ọ bụghị okwu efu, iji usoro usoro ụlọ ga-agbakwunye menu "mgbochi cellulite". Site na ịdọ aka ná ntị ndị ọkachamara na nke mbụ nke mmanụ oroma, idebe iwu a maara nke ọma na nri edozi ahụ zuru ezu iji dozie nsonaazụ. Ọ bụrụ na ịkwesighi iji belata ibu zuru ezu, mgbe ahụ, caloric ọdịnaya nke efere dị mma ka ị ghara imetụ aka: ụda ọnwụ dị arọ nwere ike ime ka ọdịdị nke cellulite pụta, kama ịchọta ndị nchụàjà na-achọgharị "peach" ị ga-enweta "peel" nke citrus. Ọ bụrụ na ị bịara Ụlọ Mmanya ahụ na 2-3rd stage nke cellulite, na ọbụna na-achọ ka ị bụrụ onye mara mma ebe a, n'ebe ahụ na ntakịrị ebe a (ma n'otu oge "kpochapụ kilogram nke 5-10- / 5 ibu), mgbe ahụ, dị mma, debe iwu na-edozi ahụ. Iji jiri cellulitis welata ibu ya ọ dị mkpa nke nta nke nta, ọ na-achọsi ike n'okpuru nchịkwa nke onye ahụ. Mgbe ọ na-ebelata, a na-emepụta ntụpọ anụ, na nwelite ya chọrọ enyemaka nke ọkachamara. Otu ihe a na-emetụtakwa fascia subcutaneous - ihe jikọrọ anụ ahụ jikọtara anụ ahụ abụba - a ga-etinyekwa ihe ha na-etinye ebe ọzọ! Site na nsogbu a, ị nwere ike ịnagide bandages na-adịghị algal na "oyi. nakwa dị ka obere porridge (oatmeal, buckwheat). Ị pụghị ime ka ndụ gị dị mma na nri ndị dị mma na calorie na-enweghị atụ, ihe bụ isi - ịchịkwa oke abụba (ma anụmanụ ma akwukwo nri) na carbohydrates (karịsịa ntụ ọka). Cheta: nkwanye na ngwaahịa ndị nwere shuga na ntụ ọka ọcha, n'oge usoro Ụlọ Mmanya (yana ụlọ), njedebe nke ndị ikpeazụ ga-okpukpu atọ! Ma nke ọzọ, ị nwere ike ịme ka nrụgide na-edozi ahụ dị ntakịrị - usoro ihe eji eme ihe n'oge a dị irè iji nweta ihe na-aga n'ihu ma bụrụ nke a na-ahụ anya site na iji nlezianya na-akwado ihe oriri siri ike.
Iji mee ka mmetụta nke nri ahụ dịkwuo mma, ma n'otu oge ahụ iji kwado akpụkpọ anụ "," ọ dịkarịa ala otu ugboro n'izu na phytomineral ime ụlọ ahụ mara mma, ihe ndị dị na mbara igwe, ihe dị ọkụ ma ọ bụ oyi na-ekpo ọkụ, ihe nkpuchi-chocolate. Site n'ụzọ, ịma mma dị otú a-iji aka nke ọma na-eme ihe na ọnọdụ nke ime ụlọ ịwụ ahụ. A na-achọta akwa ụrọ, mmiri ara ehi (kelp na fucus) maka akwachi, mmanụ aro na mmiri salite mmiri dị na ụlọ ọgwụ ọ bụla, na kọfị kọfị (maka peeling) na koko ntụ (maka nkpuchi siri ike) ga-adị na kichin. Onye obula nwe ihe nzuzo ya maka ihe omimi nke aru. E wezụga nke a, gịnị mere gị na ndị ọrụ ibe gị anaghị ekerịta ha na "ụlọ ahịa dị ala"?
Ụkwụ ahụ maka ụkọ ọnwụ
Ihe omume kachasị mkpa maka ụmụ agbọghọ
Nchoputa nke mmeghari ihe n'inwe ike
Klaasị Yoga maka mara mma
Kedu ihe m ga-eme tupu mụ agaa nri?
Yoga ma ọ bụ yoga nọ na mbara igwe
Cinnamon na mmanụ aṅụ maka ụkọ ọnwụ: Ezi ntụziaka maka nri
Esi mee ihe siri ike n'aka gị
Ndị mmadụ na-agwọ ọrịa: ero ero
Mmetụta banyere ahụ ike shuga
Sergei Senin kwuru banyere ihe nzuzo nke nkwekọrịta Lyudmila Gurchenko
Ihe mgbagwoju anya nke ihe omume maka ulo
Berry juices na mmetụta ha n'ahụ
Kedu otu esi eji ememe agbamakwụkwọ?
Kedu ka esi mee ya ka ndị nne na nna ghọta na ị tolitere?
Ngwaaka maka Virgin-Woman maka February 2017
Njirimara bara uru nke chamomile
Ihe ị ga-achọ mgbe ị na-ahọrọ igwe ịsacha
Otu esi emeso ọnọdụ nchegbu
Ọgwụgwọ hemorrhoid n'oge ime na ndiife ịgba akwụkwọ
Ose si nri maka oyi